Maxkamad ku taala Masar oo 5 sano oo xabsi ah ku xukuntay Wasiirkii hore ee ganacsiga – SBC
Maxkamad ku taala Masar oo 5 sano oo xabsi ah ku xukuntay Wasiirkii hore ee ganacsiga
Cairo:-Ilo lagu kalsoon yahay ayaa ku waramaya in maxkamadda dambiyada Qaahira ay xukuntay in wasiirkii hore ee warfaafinta Anas Al-fiqi iyo wasiirkii maaliyadda Yuusuf Butrus Qaali in aysan wax dambi ah gelin.
Sidoo kale maxkamadda ayaa sheegtay in wasiirkii hore ee guryeenta Axmed Al-maqribi iyo madaxii hore ee wargeyska Akhbaarul Yowm Maxed Cahdi in dambi lagu waayey.
Yuusuf Butrus Qaali oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda oo la sheegay in uu degan yahay London ayaa mar sii horeysay maxkamadi kuxunkuntay 30 sano kadib markii lagu eedeeyey lunsashada hantida qaranka iyo eedeemo kale.
Dhanka kale maxkamadda dambiyada Qaahiro ayaa soo saartay xukun maqnaansho ah wasiirkii hore ganacsiga iyo wershadaha Rashiid Maxed Rashiid xabsi shan sano ah kadib markii lagu eedeeyey lunsashada hantida qaranka.
Sidoo kale maxkamadda ayaa ganaaxday Rashiid in uu bixiyo labo malyan oo Ganiga masar ah oo u dhiganta 335.8 dollar.
Mr rashiid ayaa ka ambabaxay dalka Masar kadib markii uu xilka ka degay Xusni Mubaarak ka hor inta uusan soo bixin qaraarka mamnuucidda safarada wasiiradii hore iyo qaar kamid ah ganacsata iyagoo aanan helin warqad ogolaansho .